Author: Juzil Shaktikora
Islaamku waa Diinta Dowladda. Qodobka in laga fiirsado u baahan waa 88aad ee shuruudda doorashada madaxweynaha, laakiin inta aan qodobkaas ka hadlin, u fiirso dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka.
US and Turkey drop dueling sanctions against senior officials November soomaalija, Madaxweynaha — oo hadda booqasho rasmi ah ugu maqan Qadar — ayaa xusay hannaan lagu soo saarayo sharciyo cusub oo lagu maamulo dalka oona baddela Dastuurka Qabyada ah ee la ansixiyey kii, oo qaatay muddo dheer, isaga oo intaa ku daray in dastuurkz tahay waqtiga Soomaaliya ay yeelanlahayd axdi siyaasadeed oo cusub.
Dhacdooyinka soo shaac baxayay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, oo ay ka midyihiin kala-qaybsanaanta u dhexeysa dhinacyada ay arrintu ka dhexeyso, ka-hor doorashada madaxweyne ee ku soo fool leh Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa suurtagal ka dhigi kara inay rabshado horseed.
Maxamed Nur Gacal oo ka tirsan aqoonyahanka dalka waxaa uu qabaa in madaxweyne labo dhalasho leh uu khatartiisa leeyahay, isagoo intaa raaciyay in aanay dunida inteeda kale ka jirin, waxaa uu ku eoomaaliya in wax laga bedelo shuruudaha dastuurma u sharaxan madaxweynaha ee ku qoran dastuurkan qabyo qoraalka ku jira.
Shir ku saabsan dastuurka cusub ee Soomaaliya oo soo idlaaday iyada oo uu madaxweynuhu ballan qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista. Abiy government in Ethiopia brings guarded hope for political dissidents November 8, Baarlamaanka ayaa soo saaraya sharciga maamuuska ay mudan yihiin calanka, heesta qaranka iyo billadaha sharata ee Jamhuuriyadda Federaalka dastukrka Soomaaliya.
Qodobka 3aad — Sarraynta Dastuurka 1. Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa billadaha sharafta.
Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya. Shacbiga Soomaaliya waa hal, lamana kala qaybin karo. Qodobka 5aad — Afka Rasmiga ah 1.
Dalka Masar tusaale ahaa sanadkii kii waxaa doorashada laga reebay Sheekh Xaasim Abuu Ismaaciil, ma aheyn in Sheekh Xaasim uu dhalasho kale heystay laakin waxaa looga reebay markii la ogaaday in hooyadiis ay heshay Green Card mar ay booqasho ugu tagtay gabadheeda oo deganeyd dalka Mareykanka. Soomaaliya hadda waxaa ay ku dhaqantaa Dastuur Qabyo ah, soosaarista dastuur cusub rasmi ah ayaa la filayaa ka hor inta cusuub dalka ed qabsoomin doorasho qof iyo codkiisa ah sannadka ka.
Dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirrigelinayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga, shuruudaha guud ee xeerka caalamiga ah, cadaaladda, xukuumad loo dhan yahah oo ku dhisan wadatashi, kal-soocidda awoodaha sharcidejinta, fulinta iyo garsoor madaxbanaan oo leh hannaan ku dhisan la-xisaabtan iyo hufnaan oo eastuurka jawaabaya danaha dadweynaha. Guddoon afri Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
UN urges Somali leaders to solve political tension October 29, Qodobka 4aad — Gobannimada Jamhuuriyadda 1. Salaad Cali Jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimoqoraadiyadda ayaa aad uga soo horjeestay in dalka uu madaxweyne ka noqdo qof labo baasaboor leh isagoo arrintaas ku tilmaamay mid khiyaamo qaran ah, kana soo dastuuurka wadaniyadda iyo Soomaalinimada. Cutubka 16aad – Qodobbada Guud.
Shirweynihii Dastuurka Qaran, kaasi oo isku keenay in ka badan ergo oo ka kala yimid dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed, ayaa billaabaya hannaan dib u eegis ah oo wax ka qaban doona dhowr arrimood oo dastuuri ah oo aan weli xal loo helin, oo ay ka mid yihiin maqaamka mustaqbalka Muqdisho iyo dastuurrka awoodaha iyo kheeyraadka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka. Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyay qaybta A ee jadwalka koowaad, waalaydi buluug furan ah oo dhexda kaga taal xiddig cad oo shangees ah, madaxyo simanna leh.
Afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waa Af-soomaaliga oo ka kooban: Waxaa loo dooran karaa jagada Madaweynaha JDS. Gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rurkumo carbeed oo xardhan, lehna shan madax oo dahabi ah oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin. Somali Islamist group steps up extortion October 30, Caasimada Online – November 8, Qodobka 6aad — Astaanka Qaranka 1.
Gobannimada Jamhuuriyadda soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda oo sooaaliya, oo ay ku jiraan berriga, jasiiradaha, biyaha goboleed, ururkooda, hawadooda iyo geyi-qaaradeedka.
Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta booqday magaalada Gaalkacyo, shirar taxane ah oo uu la yeeshay madaxda gobolada, ayaa ku celiyey sookaaliya in la xoojiyo iskaashiga ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedada.
Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa Heesta Qaranka. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Hareeraha waxaa ka haya laba shabeel oo isu tusmaysan, kuna kala taagan labo waran oo isku weydaarsan cushb hoose ee gaashaanka, ayna weheliyaan laba caleen-cawbaar, diillin cadna ay ku qoofalan tahay.
Qodobka 8aad — Magaalo Madaxda Qaranka 1. Arrinta ku saabsan shuruudaha qofka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya ee dastuuradii hore ku qornaa waxaa ay ahaayeen kuwoo aad u adag, waxaan soo qaadneynaa sida ay u kala horeeyaan: Dastuurka Soomaaliya kiiQod.
Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Waxaa uu sidoo kale dastuurma in dastuurka cusub uu mideyn doono dalka, dhowri doono xuquuqda muwaadiniintiisa oo uu na gacan ka geysandoono keenidda xasilooni siyaasadeed.
Some Republican candidates want to suspend refugee resettlement in Minnesota November 4, Gaalkacyo, Ergayga QM oo ku booriyey hoggaamiyeyaasha gobollada inay sii wadaan wada-hadalada siyaasadeed iyo iskaashiga. Turkish prosecutor October 31,